के राजु सदाको परिवारले न्याय पाउला ? ‘डेढ धुर’ जमिनमा झुपडीमै परिवारको बिचल्ली ! – Sudarshan Khabar
के राजु सदाको परिवारले न्याय पाउला ? ‘डेढ धुर’ जमिनमा झुपडीमै परिवारको बिचल्ली !
अस्पतालकै लापरवाहीको कारण एक किशोरले ज्यान गुमाए ! डाक्टरले समयमा ध्यान दिएको भए बच्न सक्थे उनी ! प्रादेशिक अस्पतालले जीवनजलसम्म नदिएपछि घरबाट नै जीवनजल पठाउने गरिन्थ्याे… !
अब के होला ? राजूले न्याय पाउछ त ! यी यावत सवालहरु अहिले मधेशको चिया र पान पसलमा चर्को रुपमा चलेको छ ।
लापरवाहीका कारण उपचार नपाएर अस्पतालमै अन्तिम सास लिएका धनुषाका राजु सदाको परिवारमा पीड़ा थपिएको छ । भएको डेढ़ धुर जग्गमा एउटा फुसको झुपड़ी छ र पाँचजना परिवार त्यसै झुपड़ीमा बसेर दिन काट्ने गर्छन् अहिले ।
सदा परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेकोले प्लाष्टिक प्रयोग गरेर झुपड़ी अगाडि सुत्ने ठाउँ बनाइएको छ । आर्थिक रुपमा अति विपन्न राजु सदाको बुवा अशेश्वर सदासहित उनको परिवार अहिले बिचल्लीमा परेको छ । वर्षातको बेला प्लास्टिकको झुपडीमा गुजारा गर्न बाध्य सदा परिवारमा पीड़ामाथि झनै बज्रपात भएकाे छ ।
अस्पतालमा तड्पी-तड्पी मृत्युवरण भएको राजु घरको जेठाे सन्तान थिए । घरको जेठो छोराको मृत्यु भएपछि घर-परिवार अपाङ्गजस्तै भएको राजुका हजुरबुबा वयोवृद्ध सुकना सदाले न्यूज २४ लाई बताउनुभयो ।
घर बनाउन र परिवारलाई सहयोग गर्न नै भारतमा मजदूरी गर्न राजु आफ्नै गाउँका काका पर्नेसँग गएको सुकना सदाले बताउनुभयाे । मृतक राजुको घरमा आमाबुबा, तीन बहिनी र हजुरबुबा गरी कुल ५ जना सदस्यहरु छन् ।
स-सना छोरीहरुलाई फुसको घरमा र आफूहरु बाहिर प्लास्टिकको सहयोगले बनेको मचानमै रात बिताएर गुजारा गर्दै आएका सदा परिवारलाई हेरिदिने कोही छैन ।
राजुको ऊपचारमै अहिलेसम्म १० हजारभन्दा बढ़ी खर्च भइसकेको आमा नीलम सदाले न्यूज २४ लाई बताउनुभयो, ‘हामीलाई हेरिदिने कोही छैन कसरी किरिया कर्म गर्ने ?’ सदा परिवार हंसहपुर ७ परसाहीको सरकारी ऐलानी जग्गामा डेढ़ धुर जति घडेरी फुसको झुपडी घरमा गुजारा गर्दै आएका छन् ।
घर सानो झुपडी भएकोले सुत्न बस्न र खाना बनाउनसमेत ठाउँ पुग्दैन । घरको आँगनमा प्लाष्टिकको झुपडी र एउटा मचान (खाट) बनाएर सुत्ने गरिएको छ ।
जेठ १४ गते भारतबाट नेपाल आएका राजु सदा आउनेबित्तिकै गाउकै क्वारेन्टाइनमा पुगेका थिए । क्वारेन्टाइनमा छोरो बिरामी भएको थाहा पाएपछि आमा नीलमले गाउँका सबै नेताहरुसँग गुहार मागिन् तर कसैले पनि सुनुवाइ नगरेको पीडा राजुकी आमासँग छ ।
आमा नीलम सदाका अनुसार कोरोनाको आशंकामा उनी छटपटिरहँदा पनि कसैले सहयोग गर्न मानेनन् । कोरोनाकै आशंकामा समयमा उचित उपचार नपाएर छोरा राजुको मृत्यु भएको उहाँको दुखेसो छ ।
नीलमले गहभरी आंसू झर्दै भन्नुभयो, ‘क्वारेन्टाइनमा बस्दा घरबाट नै छोरालाई खाना खुवाएँ । अस्पताल लग्दा आफ्नै घरबाट जीवनजलसम्म लगेको छु । खाेई त हामी गरीबको लागि सरकार ?’
राजु मृत्यु प्रकरणबारे बुझ्न भनेर दुइटा महत्वपूर्ण कमिटीहरु शनिबार मृतक राजुको परिवारलाई भेट्न परसाही पुगेका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिसल (एनएमसी) को एउटा टोली डाक्टर खुशबू प्रिया मिश्रको संयोजकत्वमा पुगेको हो भन्ने डाक्टर अमृत पोखरेल नेतृत्वको स्वास्थ्य सेवा विभागकाे अर्काे टोली समेत राजुको घर पुगेको छ ।
छानबिन टोलीमा ७ जना अन्य सदस्यसहितले मृतक राजुको सम्पूर्ण परिवारजनसँग भेटघाट गरेर मृत्युबारे सोधखोज गरेका छन् । जांँचबुझ गरेर टोलीले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् ।
हंसपुर नगरपालिका वडा नं.७ परसाही निवासी अशेश्वर सदाका छोरा १६ वर्षीय राजु सदा १६ महिना भारतमा मजदूरी गरेर फर्केका थिए । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरअन्तर्गत कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनमा २०७७ असार ९ गते बिहान ३ बजेतिर उनकाे मृत्यु भएको थियो ।
अस्पतालले असार ८ गते राजुको अवस्था बिग्रेपछि पीडित परिवारलाई खबर गरेका थिए । गम्भीर अवस्थामा इमरजेन्सीमा भर्ना गरे पनि राजुको ज्यान भने जोगिएन । शवको विनापोष्टमार्टम पीडित परिवारलाई जिम्मा लगाएर लैजा भनेपछि पीडित परिवार आफै शववाहन भाडामा लिएर शव लगेका थिए । शवको असार ९ गते नै अन्त्येष्टि गरेको पीडित परिवारजनले बताए ।
राजु १६ महिना पहिले रोजगारीको लागि भारतको अहमदावाद र मद्रास पुगेका थिए । त्यहाँ उनी होटलमा काम गर्थे । कोभिड–१९ का कारण भारत सरकारले लकडाउन गरेपछि होटलहरु बन्द भए । भारतबाट राजु सदासहित ९ जनाको समूहमा ०७७ जेठ १४ नेपाल फर्केकाे थियाे ।
उनीहरुलाई हंसपुर नगरपालिकाकै नौवाखोर अस्पतालमा क्वारेन्टाइनमा राखियाे । १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइन बसाइपछि ७ जनालाई घर पठाइयो र २ जना राजु सदा र अरुण सदाको आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भन्दै हंसपुरकै क्वारेन्टाइनले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठायो ।
उनीहरुको आइसोलेशनमा राखी उपचार गरिरहेको अस्पतालले बताए पनि ०७७ असार ९ गते बिहान राजुको दर्दना मृत्यु भयो ।
प्रकाशित भएको : June 28th, 2020
२५ हजार सक्रिय संक्रमित नाघे लकडाउन गर्न…
बिर अस्पतालको घटनाको बारेमा बोल्यो मन्त्रालय यस्तो…
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै यति धेरै संक्रमित…
भेन्टिलेटर अभाव भएपछि सप्तरीका कोरोना संक्रमित काठमाडौं…
बलात्कार हुनबाट जोगिन युवतीले गुप्ताङ्गमा ताला लगाइन्